यी हुन विश्वकै मूल्यवान फुटबल खेलाडी, हेर्नुस कुन खेलाडी कति नम्बरमा ? | KhelNepal
यी हुन विश्वकै मूल्यवान फुटबल खेलाडी, हेर्नुस कुन खेलाडी कति नम्बरमा ?
एजेन्सी–युवा स्टार खेलाडी केलियन एमबाप्पे विश्वकै सबैभन्दा मूल्यवान् फुटबल खेलाडी बनेका छन् । ‘सिआईइएस फुटबल अब्जरभेटरी’ संस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार एमबाप्पे विश्वकै सर्वाधिक मुल्यवान खेलाडी बनेका हुन् ।
खेलाडीको विभिन्न पक्षबारे अनुसन्धान गर्दै सिआईइएस प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। विश्वकपकप विजेता एमबाप्पेले ५–५ पटकका बालोन डि’ओर बिजेता अर्जेन्टिना तथा बार्सिलोनाका लियोनल मेस्सी र पोर्चुगल तथा युभेन्ट्सका क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई समेत पछि पारेका छन् ।
सर्वाधिक मूल्यवान् खेलाडीको सूचीको दोस्रो नम्बरमा इंग्लिस क्लब टोटनह्याम तथा इंग्ल्यान्डका ह्यारी केन रहेका छन् । चौथो नम्बरमा इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीका रहिम स्ट्रलिङ छन् भने पाँचौंमा इंग्लिस क्लब लिभरपुल तथा इजिप्टका मोहमद सालह रहेका छन् ।
यता, बार्सिलोनाका मेस्सी भने सो सूचीको सातौं स्थानमा मात्रै रहेका छन् ।
मेस्सी आफ्नै देशका युवा खेलाडी पाउलो डिबालाभन्दा पनि पछि छन् । मेस्सी सातौंमा पर्दा युभेन्टसका रोनाल्डो भने मुस्किलले टप–२० मा परेका छन् ।
शीर्ष १० मुल्यवान खेलाडी
केलियन एमबाप्पे, पिएसजी– २१८.५ मिलियन युरो
ह्यारी केन, टोटनह्याम– २००.३ मिलियन युरो
नेइमार जुनियर, पिएसजी– १९७.१ मिलियन युरो
रहिम स्ट्रलिङ, म्यानचेस्टर सिटी– १८५.८ मिलियन युरो
मोहमद सालाह, लिभरपुल– १८४.३ मिलियन युरो
पाउलो डिबाला, युभेन्टस – १७१.९ मिलियन युरो
लिओनल मेस्सी, बार्सिलोना– १७१.२ मिलियन युरो
रोमेलु लुकाकु, म्यानचेस्टर युनाइटेड– १६२.० मिलियन युरो
फिलिपे कोउटिन्हो, बार्सिलोना– १५७.० मिलियन युरो
साने, म्यानचेस्टर सिटी– १५६.१ मिलियन युरो